HTC Tattoo. Ilay hadino. | Androidsis
HTC Tattoo. Ilay hadino.
el_iulius | | HTC, About us, Rom
Manodidina ny 1 taona no hahazoako Ny voalohany HTC. ahy Android voalohany. Mi smartphone voalohany toy izany (symbian sasany raha nanana aho, fa tsy heveriko ho toy izany). Efa nisy ny terminal maro tsara indrindratoa ny HTC Hero, HTC Magic na ny Nexus One. SASANY Android misy kokoa nefa tsy azo atokisana.
Tamin'ny MWC teo aloha tany Barcelona, HTC nambara tamim-piravoravoana lehibe (toy ity taona ity) fanavaozana ny terminal toa ny Hero na ny Magic any amin'ny faran'ny MWC (efa ela izy ireo no nanambara azy ireo, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia matotra izany). ny Nampidirina tatoazy amin'ny filokana rehetra ary HTC avy amin'ny fanohanana ara-teknika azy dia nilaza izy ireo fa manomana izany. lainga. Ireo mpampiasa an'ity terminal ity dia nandainga foana tamin'ny alàlan'ny fanohanana ara-teknika, hatramin'ny fahavaratry ny fahavaratra dia nivoaka ny marina, miaraka amin'ny valiny avy amin'ny fanohanana ara-teknika toy ilay voarain'ny mpizara ary sendra nandika ara-bakiteny izany.
Ry Andriamatoa XXXXXXXXX, Misaotra anao nifandray tamin'ny Ivotoerana Serivisy ho an'ny mpanjifa HTC. Mikasika ny fangatahanao dia ampahafantariko anao fa tsy misy drafitra fanavaozana ny terminal HTC Tattoo anao izao. Ny valin'ny fanadihadianay dia nampiseho fa ny fanavaozana ny findainao dia mety hisy fiantraikany amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa ary nanapa-kevitra tamin'ny farany fa tsy tokony hatao ny fanavaozana. Mbola hahazo fanohanana hatrany ny telefaona, ary misaotra anao izahay noho ny faharetanao sy ny fahazoanao azy.
Misaotra ny olona toa Lokko de HTCMania izahay dia nanana ROM miaraka amina Android 1.6 mamaha ny olana Bluetooth mitarika ny HTC. Ary nandroso lavitra ny fiarahamonina. Koa satria XDA dia nanomboka nanamboatra ROM tamin'ny lafiny sasany, misaotra an'ireo mpampiasa toa an'i Fyodor na Ikxdf. Fa manana vato ao amin'ny kirarontsika isika. Ny fakantsary. Tsy azo atao amin'ny fomba rehetra ny manamboatra ny fakantsary ratsy ho an'ny Android 2.1. Ravina Fyodor. Tsy misy kisendrasendra. Ikxdf, taorian'ny nahazoany fanomezana an-taonina ho an'ny ROM ary namoronana fanantenana tsy marina, dia nijanona. Tsy nisy ny vintana na fanantenana hahazoana ny fakantsary amin'ny Tattoo anay. Saingy nisy zaza tonga, mpampiasa HTCMania, KalimochoSugarary ny ROM-nao. Ny fivoarana kinova lava dia manomboka mampiasa izay efa vitan'ny mpampiasa, ary manao ny anjarany betsaka. Mandroso haingana izy io, ary manana izany isika amin'ny farany. Manana fakantsary fampiasa amin'ny ROM Gingerbread izahay !!! Raiso io HTC io! Ary ny ROM dia haingana dia haingana, tsy misy fanjifàna firy, ary tsara ny zavatra niainako mpampiasa! Manana kinova nightlies izy, izay avoakany tsindraindray ary miara-miasa amin'ireo tovolahy avy Cyanogen hanatsara ny ROM bebe kokoa raha azo atao. Omaly aho te-hametraka fanontaniana vitsivitsy amin'ilay mpampiasa nahomby, satria isika rehetra izay manana tatoazy ary mampiasa ny ROM, misaotra betsaka anao izahay:
Fanontaniana: Eto izahay. Miasa ny sakamalao sy ny fakantsary. Toa lainga izany, sa tsy izany? Nikasa ny ho tonga eto ve ianao?
Valiny: Raha nieritreritra an'izany aho ary antenaiko fa afaka mahazo 100% ny fiasan'ny telefaona, izany no natomboko. Raha ny tena izy dia azo atao daholo ny zava-drehetra noho ireo mpiara-miasa izay nanampy ahy tamin'ny kinova voalohany, sy ho an'ireo izay nampidirina tsikelikely.
F: Amin'ny firy ianao no nanapa-kevitra ny hidina amin'izany? Nanaraka ny asan'i Ikxdf sy Fyodor hatramin'ny voalohany ve ianao? Niara-niasa tamin'izy ireo tamin'ny andro voalohany ve ianao?
A: Niara-niasa tamina zavatra niaraka tamin'i Fyodor (bullshit) aho, saingy kely fotsiny. Nentin'ny asan'i Ikxdf aho tamin'ny voalohany, saingy raha vao hitako ny fikasan'izy ireo tsy hamoaka na inona na inona ary hanararaotra fanomezana dia nanapa-kevitra ny hiala tanteraka aho ary hijanona tsy hamoaka na inona na inona. Ny fotoana nanjavonany tamin'ny fitaovantsika dia rehefa noraisiko ny asa nataon'i Fyodor ary nanomboka indray aho.
F: Afaka milavo lefona daholo isika, toy ireo mpampiasa ireo. Fa inona no nahatonga anao nandeha foana mandra-panaovanao izany?
R: Nampahery ahy ny asa izay nataon'i Lokko tao amin'ny HTCMania sy ny vondron'olona tao amin'ny forum. Toa nisy rivo-piainana tsara, ary tsikeliko nanamarina izany aho.
F: Tsy tena terminal avo lenta ny Tatoazy htc. Na dia hitantsika aza fa ny Gingerbread dia tsy dia manana olana loatra amin'ny fiasa amin'ny tatoazy. Mety aminao ve izay nataon'i HTC? Mety hahatsiaro ho sosotra ve ireo mpampiasa an'ity terminal ity raha tsy misy ny fanavaozana?
A: Lazao anay fa ny terminal-anay dia tsy mahagaga, ary tsy ny tsara indrindra amin'ny fampiasana 3D, ny efijery dia ambany ny vahaolana, tsy OLED izy io, efijery fanoherana ... heveriko fa adihevitra marim-pototra izany ho an'ireo mpampiasa izay te hanana fiasa misimisy kokoa dia miova terminal. Ny filazana fa tsy hanohana avy amin'ny Android 1.6 izy ireo dia fampiasana ABUSIVE ilay hevitra hoe "OBSOLECENSY VOALOHANY", tsy ny rehetra no mila fampisehoana be dia be na manam-bola handoavana izany. Tsy io no terminal tsara indrindra, fa raha azo ampiasaina amin'ny Gingerbread tsy misy olana, dia nanomana famoahana vaovao izahay izay hampiseho fa ny Tattoo dia tsy tsy manana hafainganana. Ny mpampiasa dia azo antenaina hividy fitaovana vaovao amin'ny alàlan'ny fanomezana endri-javatra fitaovana vaovao ary tsy ferana ny fidirana amin'ireo rafitra vaovao. Ho ahy sy ho an'ny maro dia heveriko ho telefaona tsara izany.
F: Ary izao dia manana tatoazy misy fakan-tsary isika. Inona no sisa? Hifikitra amin'ny Cyanogen ve ianao?
A: Izany no fikasako. Raha tsy misy zava-mitranga mitohy ao CyanogenMod momba an'ity ary angamba manandrana mampiditra fitaovana hafa. Ao amin'ny Click (Tattoo) dia mbola betsaka ny zavatra tokony hatao ary be ny trosako amin'ny vondron'olona mpampiasa tattozy izay nanampy ahy.
F: Hifindra amin'ny terminal hafa ve ianao rehefa vita ny fampandrosoana ny Tattoo? Hanohy hiaraka amin'ny Cyanogen ao amin'io terminal io ve ianao? Handeha irery ve ianao toy ny fanaon'ny maro?
A: Eny, hifindra amin'ny terminal hafa aho. Raha mbola manana ny hevitry ny fahalalahana ho an'ny mpampiasa i Cyanogenmod ary tsy manova ny politikan'ny vondrona dia hanohy miaraka amin'izy ireo aho, tsara kokoa ny manambatra ny toetra mampiavaka ny maro handehanany tsirairay avy eo anilany. Mikasika ny fahitako ny tenako afaka na tsia, tsy hitako ny olana, fa raha mbola miasa ihany ny vondrona. Tsy mila izaho no mpiorina na inona na inona, manova zavatra madinidinika amin'ny rafitra fiasa fotsiny isika, tsy mahita fahamendrehana amin'ny zavatra ataoko.
P: Farany, tiako ny misaotra betsaka anao noho ny zavatra rehetra nataonao ho anay izay manana tatoazy. hanaiky fanomezana ve ianao? Sa ireo labiera nampanantenain'ny maro (anisany ny mpizara) aminao?
R: Ny andro hanaovanao fanomezana dia ho andro hieritreretanao zavatra manokana natao, ary tsy tonga izany ary inoako fa ho tonga izany noho ny zavatra toy izao. Ankoatr'izay dia tena mino aho fa ilay ROM nataontsika, dia samy nandray anjara tamin'ny zavatra fantany ny tsirairay, fa ho ahy dia ampy izay. Ho fanazaran-tena ho an'ireo izay hiditra amin'ny tsenan'ny asa (na dia tsy tsara aza ny raharaha) dia heveriko fa fanehoana tsara ny fiaraha-miasa ary tsy misy fikasana hifampikambana (faly fotsiny aho amin'izany).
Mikasika ny mololo, araka ny efa nanamarihako imbetsaka, dia raisiko ny teninao, raha vao mizotra amin'ny dia aho, dia hitako hoe iza no misoratra anarana.
Ity no tantaran'ny HTC Click na ny Tattoo. Mbola hita ao amin'ny katalaogin'ny mpandraharaha maro izy io, saingy io no hadinon'ny HTC. Server, taorian'izany rehetra izany dia nividy HTC iray hafa, Desire iray izy. HTC dia manao terminal tsara, saingy soa ihany, Manana vondrom-piarahamonina ao aoriana izahay izay mahatonga azy ireo ho lehibe kokoa ary tokony isaorana mihoatra ny iray.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manandrana misaotra ireo olona miasa aho, mba hananantsika ROM tena tsara amin'ny finday. Misaotra ny HTCMania rehetra aho noho ny zavatra ampian'izy ireo, torohevitra ary fampandrosoana. Ny mifanila aminy XDA satria fivoarana maro no mivoaka avy ao, ary fampahalalana marobe ampiasainay. Ho an'ny olona toa an'i Cyanogen, amin'ny fananganana ny tetikasa AOSP mihoatra ny antenainao. Misaotra daholo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » HTC Tattoo. Ilay hadino.
KilFer dia hoy izy:
Teny hendry; Izaho koa dia miaraka amin'ny HTC Tattoo; ary mpianatra aho; Izaho dia efa sahirana nitahiry nividy ity tanana faharoa ity ampy hividianana terminal vaovao ao anatin'ny roa na telo taona. Ny zazavavikelinay dia mahavita izay atorony azy; ary misaotra an'i Kalim fa tsy nampiseho izany fotsiny.
Misaotra betsaka anao Kalim tamin'ny nanaovanao izay tsy azo natao tamin'ny fakantsary 😀
Mamaly an'i KilFer
Segyto dia hoy izy:
Amim-pahatsorana ... milaza sy mendrika ny ekena. Tsy manana ny tatoazy intsony aho ... ary naharitra ny zavatra naharitrako FISAORANA tamin'ireto olona roa ireto (Lokko sy KalimochoAzucarado)
Faly be aho namaky an'ity, indrindra ho an'ny fanekena, saingy betsaka kokoa noho ny zava-bita. Nahazo triatra ianao! Tsy misy holazaina intsony satria kely ...
Mamaly an'i Segyto
Hentadwer dia hoy izy:
Azoko tsara fa tsy izany no nitranga tamin'ireo mpampiasa Xperia X10, mini sy mini pro, ireo orinasa ireo dia tsy mieritreritra afa-tsy ny mivarotra ny vokariny dia hadinon'izy ireo fa tsy misy manome lanja ny mpampiasa mihoatra ny fanohanana tsara sy ekipa tsara. Tsy marika.
Valio amin'i Hentadwer
jmarmu dia hoy izy:
Mino aho fa ny olona toa an'i Kalim sy ny ekipan'ny olon-tsy fantatra manodidina azy, niforona ho azy, dia manatsara ny tontolon'ny Internet. Any ivelan'ny orinasa, ataon'ny olona toa azy ho mora kokoa ny raharaha. Sanatria satria kely ny ezaka ilaina, fa eny, noho ny fanetren-tena sy fahalalahan-tanana ananana.
Mamaly an'i jmarmu
Tena faly aho tamin'ity vaovao ity, andao hojerentsika raha manome vaovao toy izao ny mpampiasa SE !! fa manana ny x10 sy ilay mini pro maty mihomehy miaraka amina 2.1 maharikoriko aho nefa tsy afaka mahita tselatra sy manararaotra ny 1ghz amin'ny iray ary amin'ny hafa tsy afaka mametraka rindranasa bebe kokoa aho satria manana fitadidiana rom feno.
emarcenet dia hoy izy:
Misaotra an'ity zazalahy ity, manana ny Tatoazy aho ary tsy hanova azy… ..
Misaotra, Kalim, sy ireo mpiara-miasa rehetra
Mamaly an'i emarcenet
joansito dia hoy izy:
Hafiriana no miandry ny fakantsary ... noho ireo olona ireo dia mbola havaozina ny tombokavatantsika ... na dia tsy manome bebe kokoa aza ny mpanodina, afaka mankafy isika hehe. Ny olona tsy manana denaria toa ahy, ary nahazo ny tatoazy maharitra & shit dia nanamora ny fiainantsika
Mamaly an'i joansito
miadana dia hoy izy:
Ny lainga mivaingana momba ny fanavaozana ny firmware amin'ny vokatra vokariny dia tsy an'ny HTC irery (jereo ny Motorola na Sony Ericcson ……), fa amiko manokana dia manelingelina ahy mihoatra ny zava-drehetra.
Heveriko fa ny fomba tokana hisorohana an'io dia ny mividy Nexus na mandeha amin'ny lafiny "maizina" ary mividy iPhone.
Mamaly an'i aloner
androidDEXT dia hoy izy:
Isika izay manana Motorola Dext dia tsy afaka mitaraina ihany, na dia ao Eclair ihany aza no miorim-paka tanteraka ireo ROM, any Froyo dia tsy ampy izy ireo ary iray ihany ny alpha avy any Gingerbread… saingy misy zavatra iray.
Nandao antsika tokoa i Motorola ary namitaka antsika.
Mamaly an'i androiDEXT
Plas Plas Plas, Chapó ho an'ity olona tsara ity sy ho an'ilay lahatsoratra.
Vao tsy ela akory izay ny sipako dia nanana olana tamin'ny finday, ary nanao an'i Lokko izy.
Nahita an'io aho, liana tamin'ny fahalianana, ary nijery ilay paositra sy ny hafa, hitako fa nandroso be ny fivoaran'ny Tattoo, mandeha tsara ny fakantsary.
Ary koa, ny fomba fanaovana zavatra sy ny fahamaotinan'ity olona ity dia mampino.
Miarahaba anao, ary misaotra betsaka tamin'ny fanoloran-tenanao
jofobu dia hoy izy:
Eny, nino koa aho fa saika izaho irery no nanana iray. Vao omaly dia sahy nametraka ROM hafa aho (leo ny famoahana ho an'ny android 2 ary ny 1.6 ...) ary manana ny froyo CyanogenMod. Mazava ho azy fa tsy manana fakantsary aho, fa faly aho.
Miasa ihany koa ve ity Gingerbread ity? Azonao atoro ahy ve ny fanovana?
Mamaly an'i jofobu
el_iulius dia hoy izy:
Raha tena mitandrina tsara amin'ny fisehoan'ny finday ianao dia tsy manome soso-kevitra izany. Misy zavatra toa ratsy. Raha ny fanatanterahana sy ny fiainana maharitra bateria no tadiavinao dia maharitra fotoana be izany. Tadidio fa Beta amin'ny fampandrosoana ...
Mamaly an'i el_iulius
Eny, faly koa aho fa misy fiainana ny Tatoa nataoko izay noheveriko fa efa teo amin'ny vatam-paty aho, ... Faly aho fa ny tafatafa ary misaotra betsaka an'i Kali tamin'ny ezaka, ... izao dia tsy maintsy manavao ny tenako amin'ny fomba hongatako, ary hametraka ROms izay tsy fantatro….
Valiny amin'ny OSCAR
Satyrisy dia hoy izy:
Tsy afaka manome tehaka an'ilay mpamorona an'ity lahatsoratra ity aho ary misaotra ampahibemaso indray ny ezaka lehibe sy ny fanoloran-tena ho an'i lokko sy kalim. HTC dia manana trosa betsaka amin'ireo mpividy roa ireo. Mirary ny soa indrindra.
Mamaly an'i Satyr
fifindra dia hoy izy:
Salama tsara ho an'ny rehetra, efa manana ny kalimocho rom aho ary milamina izany. Tsy hanova azy amin'ny hafa aho ... nanao asa mahatalanjona io. avy eto ny arahaba
Mamaly ny fifindra-monina
Tongava mpiady amin'ny Android